UMkhuseli osempilweni-Ushishino lweWanhe kunye noRhwebo Co, Ltd.
Ingca yomhlaba ye-DIY kwivenkile
Ingca yokuma komhlaba yeevenkile ze-DIY
Ingca yokuma komhlaba yoRhwebo
Ingca yokuma komhlaba yeGadi
Ingca yokuma komhlaba yeGalufa
Ingca yokuma komhlaba kwindawo yokudlala
Izikhokelo zeGrass yeMidlalo emininzi
Izalathiso zeHockey Grass
Izalathiso zengca yombhoxo
Izalathiso zeBhola ekhatywayo
Izalathiso Zengca Yomhlaba
Izikhokelo ze-chaim / iivenkile ze-DIY
Izalathiso zebala lokudlala
Kulula kwaye kunezoqoqosho ukuyifaka kumphezulu weziseko ezahlukeneyo. Umgangatho wesiseko awuphezulu. Ayikoyiki ukuqhekeka, ungakhathazeki ngamadyungudyungu kunye nokuzimisela. Izinto zengca eyenziweyo zinobuhlobo kokusingqongileyo, imveliso egqityiweyo iyakhiwa, ixesha lokwakha lihleli kwaye lifutshane, umgangatho kulula ukuwulawula, kwaye ulwamkelo lulula.
Uyilo olupheleleyo lwentsimi ye-turf eyenziweyo intle, inqanaba lokusetyenziswa liphezulu, ixesha lokuphila linokufikelela ngaphezulu kweminyaka eyi-8, kwaye lihlala ixesha elide kwaye ligcinekile, kwaye linokusetyenziswa ngokuqhubekekayo imini yonke.
Ingca eyenziweyo kulula ukuyigcina, iindleko zokugcina eziphantsi, kufuneka nje ukuba uhlambe ngamanzi ukuze ususe ubumdaka, kwaye uneempawu zokungapheli kunye nokungagungqi.
I-turf eyenziweyo ineempawu zokutsalwa kukothuka, akukho ngxolo, ukhuseleko kunye nokungabi nabungozi, ukuqina kunye nokulibaziseka kwelangatye. Ilungele ukusetyenziswa kwesikolo kwaye ngoku yeyona ndawo ibalaseleyo yoqeqesho, imisebenzi, kunye nokhuphiswano.
I-turf eyenziweyo yamkela umxholo wokhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo ukuthintela ukwenzakala kwezemidlalo. Inika amandla okonwaba aneleyo ukunciphisa umonakalo onokuthi ubangelwe ngumhlaba oqinileyo onyawo, ukuze ukhululeke ngokupheleleyo kwiinkxalabo ezahlukeneyo ezibangelwa yindawo leyo.
Ishishini leWanhe kunye noRhwebo Co, Ltd.
Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Ingca eyenziweyo, Ingca yebhola eTurf, Ingca yeGalufa eyenziweyo, Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf, Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba,